Sheekada filimka Uri: Filim dagaal oo qiiro badan kuna muujiyay Vicky Kaushal awoodiisa atoorenimo – Filimside.net
Sheekada filimka Uri: Filim dagaal oo qiiro badan kuna muujiyay Vicky Kaushal awoodiisa atoorenimo
Bollywood-ka sanad cusub ayay galeen 2019 waxayna ku bilaawdeen filim fariintiisa waaqici tahay kana hadlaayo arimo xasaasi ah balse qaab mada daalo ahaan loo dhigay si fariinta dad badan u gaarto waana filimka lagu magacaabo Uri – The Surgical Strike.
Filimka Uri – The Surgical Strike wuxuu sheeko ahaan ku saleesan weerarkii is miidaamin ee ka dhacay xerada Uri laguna qaaday ciidamada Hindiya ee Kashmir dagan iyo qaabkii ay u aar guteen ama weerarkaas kaga fal celiyeen.
Jilaayaasha filimkan: Vicky Kaushal, Paresh Rawal, Mohit Raina, Yami Gautam, Kirti Kulhari
Waqtiga Uu Soconaayo Filimkan: 2-saac iyo 18-daqiiqo
Fariinta Filimka Uri Oo Kooban: wuxuu ku saabsan yahay weerarkii ciidamada Hindiya xarunta Uri ku leeyihiin lagu qaaday September 2016 iyo sida ay kaga fal celiyeen. Wuxuuna ku bilaabanaa filimkan ayadoo ciidamada Hindiya weerar gaadmo is miidaamin lagu soo qaadayo ciidamado badana laga dilaayo saldhigoodana dhulka la dhigaayo!
Kadib waxay bilaabayaan militariga Hindiya qorshe ay ku aar gudanayaan waxaana hawl galkan uu ka bilaabanaa isku gudubka xaduudaha Hindiya laga soo bilaabo xadka ay Myanmar la leeyihiin ilaa Waqooyi Bari laga soo gaaro dhanka Pakistan daris kala yihiin.
Major Vihaan Shergill (Vicky Kaushal) waa hogaamiye awood badan ciidankana ka dhex muuqdo balse wuxuu rabaa shadaqa inuu ka fariisto si uu u daryeelo hooyadiis oo xanuunsan. Laakiin Major Vihaan Shergill (Vicky Kaushal) go’aankiisa wuu badala inuu ciidanka isaga baxo kadib markii saaxiibkiis ay wax isla soo barteen sidoo kalena seedigiis ah Captain Karan Kashyap (Mohit Raina) lagu dilaayo weerarka gaadmada ah ee xerada Uri lagu soo qaaday waxaana ka dambeeyaan ciidamo argagaxiso Pakistani ah.
Major Vihaan Shergill (Vicky Kaushal) dagaalka ayuu kusoo laabanaa iyo hogaaminta ciidamada si uu ugu aargudo seedigiis iyo dhamaan ciidamadii kale ee Hindiga ahaa dagaalka Uri lagu dilay.
Major Vihaan Shergill (Vicky Kaushal) wuxuu sameesanaa koox isku xiran waxaana kooxdan amarka sare siinayo masuulka sare Govind Bhardwaj (Paresh Rawal) sidoo kalena sarkaalka dabaglka kiisaska qarsoon Pallavi (Yami Gautam) ayaa la shaqeeneyso Major Vihaan Shergill (Vicky Kaushal) si uu hawl galkan adag ugu guuleesto uguna aar gudo ciidamada Hindiya.
Filimka Uri waxaa loo daawan doonaa Major Vihaan Shergill (Vicky Kaushal) iyo kooxdiisa isku xiran hawl galkan halista ah oo ay qaadayaan iyo sida ay ugu guuleesan karaan ayagoo halis kala duwan la kulmi doonaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Uri: mashruucaan xoogaa wuxuu kasoo yara xasuusinaa filimka Hollywood-ka ah ee dagaalka ciidanka Militariga ku saabsan Zero Dark Thirty, balse Director Aditya Dhar wuxuu la yimid aragtidiisa dhaqanka iyo dhibaatada ciidanka Hindiya ku saleesan wuxuuna Uri u yeelay dareen qiiro badan oo si wacan loogu kaabay Action dhameestiran.
Looma maleeyo Aditya Dhar inay u tahay markii ugu horeesay ee uu sheeko filim agaasimo waayo Uri habacsanaan kama muuqato si heersare ahna waa la isugu xejiyay fariintiisa waaqici ah, weliba halka saac hore qaabka fariinta isugu xirmeyso waa heer sare sidoo kalena halka saac dambe hawl galka marka la gudo gale marnaba indhaha kama qaadi kartid sida Uri loo diyaariyay.
Bandhiga Jilaayaasha: Vicky Kaushal safar dheer ayuu Bollywood-ka usoo galay inuu aqoonsi caalami ah helo waa wiilkii 2012 fanka soo galay asigoo Director caawiye ka noqday filimka Gangs of Wasseypur kadibna wuxuu doorar yar yra ku yeeshay filimada Luv Shuv Tey Chicken Khurana (2012), Geek Out (2013) iyo Bombay Velvet (2015).
Balse wuxuu aqoonsi inuu jiliinkiisa aad u sareeyo ku helay filimka sheekadiisa la wada amaanay Masaan (2015) waxaana la dareemay inuu yahay jilaa socon doono.
Vicky Kaushal 2018 ayuu Bollywood-ka ku qabsaday doorarkiisa kala duwan iyo qaab jiliinkii heerka sare ahaa uu kusoo bandhigay filimada Raazi, Sanju iyo Manmirziyan.
Ugu dambeyntii Uri wuxuu ku noqday hogaamiye ka dhameestiran oo dunida tusay inuu filim kaligiis garbaha ku qaadi karo waana hubaal mashruucaan inuu abaal marino badan ku qaadan doono kana caawin doono mustaqbalka dhow inuu helo aflaan kala duwan uu isaga hogaamiye ka noqon doono – Da’daalaa wuu gaaraa maantana Vicky waa markiisa!
Yami Gautam doorkeeda wakiilka sirdoonka ah si wacan ayay u sameesay oo lagu amaani karo laakiin muuqaal ahaan filimka kuma badno.
Ruug cadaa Paresh Rawal doorkiisa kooban waa mid adag oo saameyntiisa wato inkastoo uusan shaashada ku badneyn haddana marwalbo oo soo galo shaashada waa qasab inuu hadal heynta la wareego.
Ugu dambeyntii wiilka musal salada kasoo dalacay Mohit Raina door wacan oo saameyntiisa wato ayuu ka qaatay filimka Uri sidoo kalena siweyn ku qiiro galinaayo madaama weerarka gaadmada ah ee Uri isaga lagu dilaayo.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Uri:
Fariinta waaqici ah oo lagu kaban Action iyo dareen qiiro badan.
Muusigada gadaal ka yeereyso (Background Score) soo si wacan loo diyaariyay
Bandhiga Vicky Kaushal iyo qaabka uu fariinta u diyaariyay Director Aditya Dhar oo markii ugu horeeyay filim sameeyay.
Muxuu Ku Liitaa Uri:
Dhacdooyin ama muuqaalo qaar aan loo baahneyn ayaa ku jiraan filimkan balse kuma badno.
Heeso qiiro badan malahan waxayna kaabi lahaayeen siweyn fariinta filimkan waaqiciga ah.
Waa filim reer magaalka loogu tala galay ee ma ahan mid dadka jecel aflaanta Action-ka iyo mada daalada qayaaliga ah xiiseen doonaan.
Qiimeynta Sheekada Uri: 3.5/5 (Sedex xidig iyo bar)
Gunaanad: Uri waa filim fariin waaqici ah xambaarsan weliba dadka Hindiga aad u doonayeen inay wax ka ogaadaan weerarkii Uri waxaana lagu kabay Action iyo dareen qiiro badan taasi oo ka caawin doonto mashruucaan dad badan inay usoo daawasho tagaan dhanka Boxoffice-na ay u badan tahay guul wacan inuu gaaro.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Filimka Uri – The Surgical Strike:
Waxaa Aqrisay 674
wlo sakariye filimki sandakoshi 2 trailerkiza le na tuzten ee boxofficeka waxa uka nqoday nozo gudbiya fdlan